WhatsApp ကို iPhone အတွက်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone အတွက် Whatsapp ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာတည်ရှိခဲ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမုန်းတီးသောဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ WhatsApp သည် iOS App Store သို့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၌ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိရပါသည်။ အစပိုင်း၌ဤအပလီကေးရှင်းမှာယူရို ၀.၉၉ ဖြစ်၍ ငွေပေးချေမှုကြောင့်သင်သည်လျှောက်လွှာကိုဘ ၀ အတွက်အသုံးချခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လများအတွင်း Android သည်အမြှုပ်ကဲ့သို့လူကြိုက်များလာသည်။ WhatsApp သည် Google Store သို့တိုးချဲ့ရန် App Store မှငွေပေးချေမှုကြောင့်လုံလုံလောက်လောက်ကြီးထွားလာသည်။ ဒီတော့ဒါက Google Play Store ကိုအသစ်အဆန်းနဲ့ဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းသည့်ယူရို ၀.၉၉ သို့သွားခဲ့သည်။
တကယ်တော့ Android နည်းလမ်းဟာရေရှည်မှာပိုစျေးကြီးတယ်၊ ခဏကြာပေမယ့် iOS ကိုတိုးချဲ့လိုက်တယ်။ WhatsApp သည်တစ်နှစ်သာယူရို ၀.၉၉ ဖြင့် ၀ ယ်ယူထားသည်မှာသေချာသည်။ အထူးသဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ထိုကတည်းက WhatsApp သည်ပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်.
ဒါ့အပြင် iPhone အတွက် WhatsApp ဟာသူ့ရဲ့ပြာတွေကနေထလာတယ်၊ တိုးတက်မှုမှာဆိုးရွားတဲ့ခံစားမှုတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ တူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ (သို့) Android မှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေထက်ပိုပြီးပေါင်းထည့်လိုက်တယ်။ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ လျှောက်လွှာသည်လူကြိုက်များလာသည်။ လူအများမသိသောအရာဖြစ်သည် WhatsApp ကို iPhone တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်နှင့်၎င်းသည် Apple ၏ဖုန်းနံပါတ်များကိုကြွေးတင်နေသည်။
1 WhatsApp ကို iPhone အတွက်အခမဲ့ရယူပါ
2 iPhone မှာ WhatsApp ကို update လုပ်နည်း
3 iPhone အတွက်နယူး WhatsApp ကိုတီထွင်ခဲ့သည်
WhatsApp ကို iPhone အတွက်အခမဲ့ရယူပါ
iPhone အတွက် WhatApp သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ၊ စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးသုံးစွဲသူသည် WhatsApp မှဝယ်ယူပြီးနောက်လုံးဝအခမဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများလာသည်နှင့်အမျှ WhatsApp မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ PDF နှင့် .docx ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို iPhone အတွက် WhatsApp သို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။
သို့သော် iOS သည်အနည်းငယ်ကျဉ်းမြောင်းသောပလက်ဖောင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်ရာလက်ရှိတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည် WhatsApp ကို install လုပ်ရန် App Store ဖြစ်သည်။ ဤ link ကို အသုံးပြု၍ သင်သည် iPhone အတွက် WhatsApp ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။ App Store ရှိအခမဲ့ hits ကဏ္ ten ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်လည်း၎င်း app သည်အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏အောင်မြင်မှုသည်ကြီးထွားလာပြီးတိုးတက်လာသည်။ WhatsApp ကဲ့သို့သောကျော်ကြားသော "bugifxes" အတွက် update များသည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက်ဖြစ်ပျက်မှုကိုမရပ်တန့်စေပါ။
iPhone မှာ WhatsApp ကို update လုပ်နည်း
iOS အသုံးပြုသူများအတွက် iPhone အတွက် WhatsApp ကို update လုပ်ပါ ဒါဟာအတော်လေးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်, အိုင်ဖုန်းပေါ်ရှိ application အားလုံး update လုပ်အတူတူစနစ်ပေါ်တွင်အိပ်ရကြ၏။ iOS ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ဗဟိုအချက်အလက်များမှာ App Store ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံရန်တစ်ခုခုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည့်ပထမအဆင့်မှာ App Store သို့သွားပါ.
ညာဘက်အောက်ပိုင်းမှာ၊updates များကို"၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောလျှောက်လွှာအသစ်များအားလုံးနှင့်အတူစာရင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး" မွမ်းမံနိုင်သည် "သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံအတိုင်းမွမ်းမံလိုသည်ကိုရွေးချယ်ရန်တစ်ခုကိုရွေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းသောဖြစ်ရပ်၌ WhatsApp ကို iPhone တွင်မွမ်းမံရန်ကျနော်တို့ရိုးရိုးလေးနှိပ်ရမယ်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့သွားပါက iPhone ချိန်ညှိချက်များအပိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးစရာရှိသည် အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်ပါ applications များ။
iPhone အတွက်နယူး WhatsApp ကိုတီထွင်ခဲ့သည်
iOS 10 နှင့် i အသစ် Emoji ဗူး update တစ်ခုစီတွင် WhatsApp ကိုသက်ရောက်သည်။ iPhone အတွက် WhatsApp ၏ emoticons အသစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ iPhone အတွက် WhatsApp ၏ emoticon pack သို့မျှော်လင့်ထားသည့်ရောက်ရှိလာသည့်တစ်ခုမှာ paella ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မုန့်တစ်လုံး၊ ဂေါ်ရီလာနှင့်ကြံ့ကြံ့တစ်ကောင်ပင်ရှိလိမ့်မည်။ ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုကိုလည်းအလားတူထောက်ပြသည် iPhone အတွက် WhatsApp ဖုန်းအသစ် \_ t ပြီးတော့သရဖူရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှာခေါင်းကိုအအေးမိစေသည့်ရယ်စရာကောင်းသောအီမိုဂျီများရှိသည်၊ MSN Messenger သေဆုံးပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့အများစုအသုံးပြုလိုသောအရာ၊ အော့အန်နေသောကိုင်ဆောင်ထားသောလူရွှင်တော်များရှိသည်၊ နောက်ဆုံးတွင် WhatsApp သို့ ၂၀၁၆ ဇွန်မှ iOS 10၊ iOS 2016 beta နှင့်အတူ။